Hello Nepal News » नोभारामाथि युभेन्टसको फराकिलो जित : रोनाल्डोको गोल
नोभारामाथि युभेन्टसको फराकिलो जित : रोनाल्डोको गोल
नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा इटालियन क्लब युभेन्टस शानदार जित दर्ता गरेको छ । आज आइतबार दिउँसो भएको खेलमा युभेन्टसले दोस्रो डिभिजनको टिम नोभारालाई ५–० ले हरायो । युभेन्टस ट्रेनिङ सेन्टरमा भएको खेलमा घरेलु टोलीलाई जिताउन ४ जना खेलाडीले गोल गरे ।
युभेन्टसले खेलको २०औं मिनेटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । रोनाल्डोले नयाँ खेलाडी डेजान कुलुसेभ्स्कीको पासमा बक्स भित्रबाट निकै सुन्दर गोल गरेका थिए । रोनाल्डोको कडा लो प्रहारमा नोभाराका गोलकिपरले रोक्ने मौका नै पाएनन् ।
नयाँ प्रशिक्षक आन्ड्रेया पिर्लोले पहिलो र दोस्रो हाफमा फरक–फरक टिम उतारेका थिए । पहिलो हाफमा रोनाल्डोसहितका खेलाडी उत्रिँदा दोस्रो हाफमा नयाँ टिमलाई उतारिएको थियो । यसै खेलबाट नयाँ खेलाडी अर्थुर मेलोले पनि डेब्यु गरे ।
दोस्रो हाफमा युभेन्टसले ४ गोल थप्यो । खेलको ५६औं मिनेटमा डिफेन्डर मेरिह डेमिरालले डग्लस कोस्टाको पासमा गोल गरे । त्यसपछि खेलको ६६औं मिनेटमा मार्को पिजाकाले गोल गरेर युभेन्टसलाई ३–० को अग्रता दिलाए । त्यसपछि इन्जुरी समयमा मोनोलो पोर्टानोभाले ३ मिनेटको बीचमा २ गोल गरे । उनले ९१औं मिनेटमा पहिलो गोल गरे भने ९३औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल युभेन्टसले ५–० ले जित्यो ।
प्रकाशित मिति २८ भाद्र २०७७, आईतवार १०:२५
आफूलाई ‘किक आउट’ गर्ने कोम्यानलाई जाँदाजाँदै स्वारेजको कडा ‘डाइलग’ !
सेभिल्लालाई हराउँदै बार्यनले जित्यो युइएफए सुपर कपको उपाधि
नयाँ सिजनको च्याम्यिन्स लिगमा ५ जना सब्सिच्युट गर्न पाइने
ज्लाटनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण
‘बिदाइमा आँसुसरी’ बने स्वारेज : २० भनाइहरूको नेपाली अनुवादसहित
रोनाल्डोसँग तेस्रोपटक हैन, सधैं सँगै खेल्न चाहन्थें : मोराटा
के तपाईं सुन्तला खाँदा बोक्रा फ्ँयाक्नुहुन्छ ? एकपटक यो पढौं
बार्सिलोनाले आयाक्सका खेलाडी भित्र्याउने पक्का
युइएफए सुपर कप : उपाधिका लागि आज बार्यन र सेभिल्ला भिड्दै
स्वारेजलाई ‘लखेट्दा’ बार्सिलोनाको २ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा !